किन हुन्छ प्रेममा धोका ? कारणसहित - हरियाली नेपाल
म्याग्दीका गाउँगाउँमा ‘सेतो पुतली झुस’ समस्याजनगणनाः गाउँ पुगेका सुपरीवेक्षकलाई फोन र इन्टरनेटको समस्याआईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग-२ : नेपाल ओमान भिड्दैसंविधान दिवस : ताप्लेजुङमा हत्या मुद्दाका तीन जनाको आधा कैद सजाय मिनाहाअकस परमाणु सम्झौताः फ्रान्सेली विदेशमन्त्री भन्छन्, अस्ट्रेलियाले धोका दियोअसोज ११ गतेदेखि आईपिओ निष्काशन, कति कित्ता भर्ने ?राष्ट्रपतिद्वारा संविधान दिवसमा ९०३ जनालाई मानपदवी र विभूषण प्रदान (सूचीसहित)संविधान दिवस: मधेसमा दुई धारऐन कानून जनताकै भावना अनुसार बनेका छन्ः मुख्यमन्त्री भट्टसंविधानको सही कार्यान्वयनविना सुशासन कायम हुन सक्दैनः मुख्यमन्त्री पोखरेल
किन हुन्छ प्रेममा धोका ? कारणसहित
Post published:२७ भाद्र २०७८, आईतवार ०६:५८
काठमाण्डौंः अक्सर धेरैको जीवन प्रेम र ब्रेकअपको गोलचक्करमा घुमिरहेको हुन्छ । यो नव-यौवना जोडीको मात्र कुरा होइन, पति-पत्नीबीच पनि यस्तो हुन्छ । विवाहित वा एकसाथ बसेको छ भन्दैमा उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भन्ने छैन । एकसाथ बसेपनि दम्पतीबीच मनमुटाव, झैझगडा, आपसी असमझदारी भइरहेको हुन्छ ।
प्रेमी-प्रेमिकाको त कुरै छाडौं । धेरैजसाको सम्बन्ध दिगो हुँदैन । प्रेम गर्ने, ठाकठुक पर्ने, ब्रेकअप हुने क्रम उनीहरुमा चलिरहन्छ ।
प्रेम सम्बन्ध किन सधै सुमधुर हुँदैन ? किन ब्रेकअप हुन्छ ? किन एकअर्काले धोका दिन्छ ?
यसमा अनेक कारण हुनसक्छ । भनिन्छ, प्रेम विश्वासमा टिकेको हुन्छ । त्यसैले प्रेम सम्बन्धलाई जोड्ने सबैभन्दा मूख्य तत्व हो, विश्वास । त्यससँगै समझदारी आवश्यक हुन्छ । एकअर्कालाई गर्नै केयरिङ त छँदैछ ।
यद्यपी विविध कारणले दम्पती वा प्रेम जोडीबीचको समबन्धमा दुई चिरा पर्छ । उनीहरुले एक अर्कालाई धोका दिन थाल्छ । किन ?
शारीरिक सम्वन्ध पनि प्रेममा धोकाको एउटा ठूलो कारण हो । नयाँ व्यक्तिसँग सेक्सको चाहले पनि अक्सर पुरुष वा महिलाहरुलाई आफ्नो पार्टनरसँग धोकाका लागि उक्साउँछ । यस्ता व्यक्तिहरुमा असन्तोषको भावना हुन्छ जसले गर्दा उनीहरु घरभन्दा बाहिर सम्वन्ध गाँस्न पुग्छन् ।
कहिलेकाहीँ बदलाको भावनाले पनि ‘धोका’ लाई जन्माउँछ । आफूलाई विगतमा कुनै प्रकारको हानी पुर्‍याएको व्यक्तिलाई बदला लिन खोज्नु मानवीय प्रवृत्ति नै हो । यस्तो अवस्थामा आफ्नो अहंकार सन्तुष्ट पार्नका लागि उसले धोकाको सहारा लिन्छ । उ आफ्नो प्रेमी/प्रेमिकासामु यो सावित गर्न चाहन्छ कि उसलाई चाहनेहरुको यो संसारमा कमि छैन । एजेन्सीको सहयोगमा
७ किसिमका हुन्छन् यौन-साथी, यी मध्ये तपाँई कुन ?
३ भाद्र २०७८, बिहीबार १२:०१
के महिलाहरुले यौन सन्तुष्टिबारे झुट बोल्छन् ?
२७ आश्विन २०७७, मंगलवार ०८:१३
लकडाउनका कारण मुसाहरू अधिक आक्रामक हुन थालेपछि…
४ भाद्र २०७७, बिहीबार ०९:१३
अचम्मको परम्परा: जहाँ पुरुषले जोकोहीसँग जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सम्भोग गर्न सक्छ
१ फाल्गुन २०७७, शनिबार १४:५८
अमेरिकी परियोजना एम.सि.सी. र विदेशी राष्ट्र प्रमुख विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनीलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
क. सरकारको विदेश नितिमा लम्पसारवाद ।
ख. छिमेकी राष्ट्र रिझाएर सत्ता टिकाउने दाउ ।
ग. जहानियां शासनको निरन्तरता दिने प्रयास ।